Iyo Raspberry Pi inogona zvakare kutamba DRM zvemukati | Linux Vakapindwa muropa
Hatina kufanirwa kumirira kwenguva refu: chigamba chekutamba zvakachengetedzwa zvemukati (DRM) pane Raspberry Pi yatosvika
Musi waAugust 31, Google yakagadziridza Widevine uye yakasiya vamwe vashandisi "vakarembera", senge vedu vedu vane Raspberry Pi neiyo yepamutemo inoshanda sisitimu. Izvo zvaiita kunge zvisina kupenda zvakanyatsonaka, nekuti vagadziri veOSMC vakavimbisa kuti vangangoshaya mhinduro kusvika kunonoka 2021-kutanga 2022, asi nhasi gadziriso yasvetuka iyo yadzosera zvinhu zvakajairwa, kana kune zvakajairika zvakatanga munaKurume gore.
Raspberry Pi OS mainjiniya vakatotaura kuti chigamba chaive chiripo mushanduro yehurongwa hwavo hwekushandisa pasi peyedzo iyo yakavakirwa paDebian 11, uye kuti kutanga kwesvondo rinouya zvinenge inowanikwa kubva kuBuster. Pakanga pasina chikonzero chekumirira kwenguva yakareba zvakadaro. Nhasi Chitatu, mazuva akati wandei asati avimbiswa, isu tinogona kutogadzira izvo zvemasevhisi seSpotify kana Amazon Prime (zvese zviri mumusoro).
Iyo DRM pane iyo Raspberry Pi haisi 100% yepamutemo
Muvhuro uno tinotaura munzira mbiri (kuburikidza official forum) kudzoreredza kugona kutamba zvirimo zvakachengetedzwa paRaspberry Pi uye isu takayambira izvo Kunyangwe kumutsiridza kuDebian 11 kana kuita mhando ye "backport" pachedu yaive nzira dzepamutemo. Izvo zvasvika nhasi hazvisi zvakare; ivo vanogadzira yeiyo inoshanda system yeiyo rasipibheri bhodhi vaita basa ratakaita kuti tikwanise kubereka iyi mhando yezvinyorwa, asi zvirinani uye kufambisa nyore kuiswa.
Kune avo vasina kugonesa rutsigiro uye vachida kuzviita, ingovhura terminal uye nyora iyi mirairo:
Kuti shanduko dzigone kushanda, nhanho yekupedzisira ichave yekutangazve iyo inoshanda sisitimu.
Iye zvino isu tinongofanirwa kutarisira kuti Google haigadzirise munguva pfupi, asi kristaro bhora rangu rinondiudza kuti panguva ino tine Widevine kwechinguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Hatina kufanirwa kumirira kwenguva refu: chigamba chekutamba zvakachengetedzwa zvemukati (DRM) pane Raspberry Pi yatosvika
i3 inogona kunge iri yako yakanakisa sarudzo pane yakaderera-zviwanikwa komputa, iyo KDE fan inokuudza
GIMP 2.10.28 inouya nekusvetuka vhezheni chete kugadzirisa bugs